Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny mpitondra ambony any Etazonia dia manentana ny Trano Fotsy hanokatra indray ny dia iraisam-pirenena
Ny ezaka mankany amin'ny fisokafana dia tokony hanomboka amin'ny fikatsahana "lalantsara ho an'ny fahasalamam-bahoaka" eo anelanelan'ny Etazonia sy Angletera, raha jerena ny maha-zava-dehibe ny tsenan'ny dia sy ny hafainganan'ireo vaksiny ary ny fihenan'ny tahan'ny aretina.
Mampitandrina ireo mpitondra dia fa hisy vokany ratsy eo amin'ny toekarena raha mikatona ny sisin-tanin'i Etazonia
Ny taratasy dia manentana ny fananganana vondron'asa ho an'ny daholobe sy tsy miankina amin'ny faran'ny volana Mey
Etazonia dia tokony ho mpitondra manerantany amin'ny famerenana indray ny dia iraisam-pirenena
Ny mpitarika ireo orinasam-pitaterana eran-tany 23 dia nandefa taratasy tany amin'ny filoha Biden ny talata teo ary nandrisika ny fandrosoana bebe kokoa hanokatra indray ny dia iraisam-pirenena - toy ny fahombiazana amin'ny toerana hafa manerantany - ary fampitandremana ny vokadratsin'ny toekarena mahatsiravina raha mikatona ny sisintanin'i Etazonia.
Ny taratasy dia manamarika fa ny siansa ankehitriny, ny fahombiazan'ny vaksinin'ny vaksinin'i Etazonia, ary ny Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC)Ny torolàlana manokana dia mamela ny dingana mankany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsidihana iraisam-pirenena.
"Na dia mikatona ho an'ny ankamaroan'izao tontolo izao aza ny sisin-tany amerikana, ny fandrosoana ara-tsiansa mahavariana hiadiana amin'ny areti-mandringana COVID-19 sy ny fametrahana vaksinim-paritra lehibe vitan'ny fitondranao dia namela ny famerenana amin'ny laoniny ireo hetsika marobe", hoy ilay taratasy. "Ho an'ny fandraisana anjarany ara-toekarena sy ara-kolotsaina rehetra dia tokony ho eo amin'izy ireo ny dia iraisam-pirenena ary hanafaingana ny fanarenana ara-toekarena tadiavintsika rehetra izany."
Ny taratasy dia nandrisika ny fananganana vondron'asa ho an'ny daholobe sy tsy miankina amin'ny faran'ny volana Mey mba hamolavola sori-dalana miorina amin'ny risika ho amin'ny fanokafana soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena mankany Etazonia.
Nilaza ihany koa ilay taratasy fa ny ezaka mankany amin'ny fisokafana dia tokony hanomboka amin'ny fikatsahana "lalantsara ho an'ny fahasalamam-bahoaka" eo anelanelan'ny Etazonia sy ny Fanjakana Mitambatra (UK), nomena ny maha-zava-dehibe azy io ny tsenan'ny dia sy ny hafainganam-pandehan'ny vaksiny ary ny fihenan'ny tahan'ny aretina. Ny zoma, notokanan'i Angletera i Etazonia tamin'ny ambaratonga afovoany "amber" an'ny rafitra "jiro fifamoivoizana" vaovao ho an'ny dia iraisam-pirenena.